Isikhumba seTiger ngeFotohop. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULaura Carro | | Idizayini yeMifanekiso, Ukufota, Photoshop
Lusuku lokwenza utshintsho lolusu. Zombini ebusweni bethu, izandla okanye iinyawo, nantoni na oyithandayo. Ezethu, okanye umhlobo okanye ilungu losapho. Namhlanje sizisa esi sifundo ukuba sonwabe ukutshintsha iimpawu zolusu.
Kule meko, siya kusebenzisa ulusu lwengwe ukuguqula ezethu, okanye njengoko besesitshilo, mhlawumbi eyomhlobo. Kodwa ungalibali ukuba ezi ziya kuba njalo iingcebiso zokuba uyile; Isenokuba sisikhumba senyoka, ipanda, okanye ezinye iziqhamo, phakathi kwabanye. Banokulandela amanyathelo ethu ngaphandle kokusebenzisa isilwanyana esikhethileyo.
Into yokuqala iya kuba kukufumana imifanekiso esifuna ukuyisebenzisa. Isenokuba yifayile ye- Ifoto yakho, okanye yomhlobo okanye isizalwane osigcinileyo ekudibaneni. Kwaye emva koko sikopa isithako esibalulekileyo: kwimeko yethu ingwe.
Sisusa into encinci ukubona ukuba siyibeka njani ingwe ngokubhekisele ebusweni.
Kule meko, kuba sifuna ukukopa icandelo nje lolusu Ukuyibeka ebusweni, akufuneki ukuba sichaze ngokuthe ngqo nokuba siyibeka phi ingwe. Logama nje kukho isiqwenga soboya esihambelanayo siyakulunga.
Sikhetha icandelo lobuso apho sifuna ukuba nesiphumo. Kamva CTRL + SHIFT + mna, okanye, kwimenyu yokukhetha, ukhetho Buyisela umva ukhetho, ukucima wonke umfanekiso esingazukuwusebenzisa.
El imo yokudibanisa Kuxhomekeka ekubeni uyifuna ngokwenyani, siyabona ukuba imo eyalekeneyo iya kuyishiya icacile, kwaye inomoya oqinisekileyo. Sikhetha ukusebenzisa ukhetho dibanisa uphinda-phindo.
Gqibela sisebenzisa irabha ukunika abanye Ukugqitywa kokugqibela kweenkcukacha, Ukuqinisekisa nje ukuba akukho mijelo ethe ngqo okanye i-streak eye yangena kwenye indawo esingayifuni.
Nje ukuba sibe nemveliso yokugqibela, siya kuba nakho ukubonakala ngokutsha, okunokuya ukusuka kumnandi ukuya kwinto enokwenyani, Kuxhomekeka kwimowudi yokudibanisa esifuna ukuyisebenzisa; kodwa ekugqibeleni ulusu lwethu okanye olo lwabahlobo bethu luya kubonakala ngokwahlukileyo. Masizame!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Isikhumba seTiger ngeFotohop.